Fanaovana arotava Tsy filam-banona fa tena fiarovana
Tsy maintsy manao arotava ny isam-batan’olona izay mivoaka ny trano manomboka anio alatsinainy 27 aprily rehefa noraisin’ny fanjakana ny fanapahan-kevitra
fidirana tsikelikely amin’ny fialana ny fihibohana nanomboka ny 18 aprily. Misy ny sazy izay asa mahasoa ny daholobe, toy ny fanadioavana ho an’izay tsy tratra manao arovava. Tsy filam-banona velively io, fa fiarovan-tena sady fifampitsimbinana. Misy ny amidy amin’izy izy ireny izay 500Ar monja aza dia efa mahazo. Tsy voatery hiandry homena foana na misy azan y fizarana ataon’ny fanjakana, fa tokony hiezaka ny tsirairay satria efa ny 19 martsa no nidiran’ny coronavirus teto. Hatreto, mbola tsy misy vaksiny mahasitrana ny coronavirus, mbola tsy misy fanafody ofisialy, ary na misy aza ilay tambavy ambara fa fanefitra sy ambaran’ny mpikamban’ny governemanta sasany, fa rehefa misotro anio dia voaharo, dia aleo mailo sy mitandrina hatrany.